China munhu zvichienderana zvokudhinda mufananidzo ekisipota uye Product | miti yakasvibira
Chenille Letters / Nokunwa Waini
akadhindwa makwapa akasvibirika
Rakarukwa bheji / chitaridzi
2nd Kuvaka, No. 5, Guxia Industrial 2nd Rd., Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Munhu zvichienderana kudhindwa mufananidzo
A tsika sublimated nama (kana ruvara rakadhindwa bheji) ibhuku rakasiyana muitiro kuti inowana rakapotsa Photographic unhu. Ruvara kwacho anopa bheji rako tsika sublimated isina kumbovapo akadzama pamwe noutano ruvara uye Kujeka usingaoneki uye chinopfuurira zvenzwi. The simba chinooneka unhu makwapa akasvibirika aya kusiyana chinhu iwe ndamboona. vatengi Your, vatengi kana nhengo dzesangano renyu zvirokwazvo Funga navo uye ndizvo branding zvose pamusoro. No vanofanira kuverenga mavara. Colors ar ...
Min.Order Uwandu: 100 Piece / Pieces
A tsika sublimated nama (kana ruvara rakadhindwa bheji) ibhuku rakasiyana muitiro kuti inowana rakapotsa Photographic unhu. Ruvara kwacho anopa bheji rako tsika sublimated isina kumbovapo akadzama pamwe noutano ruvara uye Kujeka usingaoneki uye chinopfuurira zvenzwi. The simba chinooneka unhu makwapa akasvibirika aya kusiyana chinhu iwe ndamboona. vatengi Your, vatengi kana nhengo dzesangano renyu zvirokwazvo Funga navo uye ndizvo branding zvose pamusoro.
No vanofanira kuverenga mavara. Mavara risingaperi. Mumwe zana Mavara zvakafanana yakaderera mutengo mumwe ruvara. Hapana okuwedzera mhosva kunobva nhau. Kubva 10% kusvika 100% nhau, nama wako ndiye yakaderera mutengo chete.
Printing anotibvumira kuita zvose zvemarudzi zvinhu zvisingaiti nezvakarukwa uye dzakarukwa, kufanana dzisinganyatsooneki mashoko uye mavara risingagumi. Kana uchida munhu noutano asian-on-a-chigamba, iwe chete kuti vakumbire anodhinda, hunoita wakakwirira kupedza magadzirirwo. Miti yakasvibira Badges vanodada kuti vaitungamirira basa akaigadzira makwapa akasvibirika ane sublimation yokudhinda pamwe nezvakarukwa kugadzira.
Previous: Munhu zvichienderana kudhindwa penyika
Next: Munhu zvichienderana zvokudhinda makwapa akasvibirika
Patches nokuti Printing
Custom sublimation chigamba
Chigamba basa sublimation
Munhu zvichienderana zvokudhinda makwapa akasvibirika
Nama basa Printing mazano
chenille Patch Letters , Hook And Loop rakarukwa Badge, chenille Varsity Letter , chenille Varsity Letter T Patch , chenille Letter Patches , Embroidered Badge , All Products - 粤 ICP 备 18108880 号 -1